Xasan Sheekh oo beeniyay inay kala qeybsan yihiin Midowga Musharrixiinta | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Xasan Sheekh oo beeniyay inay kala qeybsan yihiin Midowga Musharrixiinta
Iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya inay dhinacyo badan ku kala qeybsan yihiin Xubnaha Midowga Musharrixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa warkaasi beeniyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh oo ka hadlayay kulan ay Midowga Musharrixiinta ay sheegeen in looga soo horjeeday Afgembigii fashilmay ee ka dhacay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in wararka sheegaya inay kala qeybsan yihiin aysan waxba kajirin, isla markaana kuwa sheegay ay yihiin kuwii 5-tii sano ee la soo dhaafay lacagta lagu siinayay aflagaadeynta mucaaradka ee loo yaqaano (CAYAYAANKA BARAHA BULSHADA).
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray Xasan Sheekh Maxamuud in inta badan Midowga Musharrixiinta ay jiraan dalka dibadiisa, halka ay kulanka Shaqo uga badan yihiin Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud & Xasan Cali kheyre.
“ Majiraan inay kala qeybsan nahay, inaan Afgembi diidno waan ka mideysan nahay, inaan kaligii talisnimo diidno waan ka mideysan nahay, balse majiraan wararka dadka qaarkood ay sheegayaan ayuu yiri” Xasan Sheekh Maxamed.
Xasan Sheekh oo beeniyay inay kala qeybsan yihiin Midowga Musharrixiinta was last modified: December 31st, 2021 by warsan radio
Dhageyso;-Warka Galab ee Idaacada Warsan
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka iyo Safiirka Sweden oo Muqdisho ku kulmay
Diiwaangelinta musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo bilaabaneysa